Nka ọkachamara - ka ị ga -esi mee ya site na nkwụsị | Bezzia
Susana godoy | 12/09/2021 20:00 | Mma
Ị chọrọ ị nweta pedicure ọkachamara? Yabụ na ọ nweghị ihe dị ka ịgbaso usoro nke usoro dị mkpa wee bido onwe gị ime ya nke ọma n'ụlọ gị. Yabụ, ị ga -enwe oge pụrụ iche maka onwe gị, ịnụ ụtọ oge pụrụ iche wee nweta nsonaazụ ka mma maka mbọ gị, n'ihi na ụkwụ gị chọkwara ya.
Ọ bụ eziokwu na n'oge ọkọchị, anyị na -ebutekarị ya ụzọ, mana ọbụlagodi na mgbụsị akwụkwọ abịa, anyị agaghị ekwe ka ọ gbapụ. N'ihi na nlekọta ụkwụ ọ bụkwa nke nkiti na maka nke ahụ, anyị kwesịrị ime ya n'ime afọ niile. Echefula otu esi eme ya n'ihi na ugbu a anyị na -agwa gị ihe niile.
1 Kwadebe ịsa ahụ ụkwụ
2 Ọkachamara ọkachamara: Bee ma debe ntu
3 Na -elekọta cuticles na ikiri ụkwụ
4 Nhọrọ nke enamel
5 Aka ikpeazụ
Kwadebe ịsa ahụ ụkwụ
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ bụghị mgbe niile ka ọ bụ nzọụkwụ mbụ, mana ọ bụ nke anyị. N'ihi na n'ụzọ dị otu a anyị nwere ike mee ka akpụkpọ ahụ dị nro mgbe ọ na -abịa iwepu ụfọdụ ezughị okè. Yabụ, ọ nweghị ihe dịka obere mmiri ọkụ n'ime nnukwu akpa nke na -enye anyị ohere itinye ụkwụ abụọ. Ịnwere ike ịgbakwunye ntakịrị mmanụ mmanụ dị mkpa iji hụ ịdị nro niile kamakwa izu ike zuru oke. Yabụ, ị ga -eche ruo mgbe mmiri foduru nke nta. Yabụ ị nwere ike irite uru mgbe niile n'ịrụ ọrụ na kọmpụta ma ọ bụ ihe ọ bụla masịrị gị.
Ọkachamara ọkachamara: Bee ma debe ntu
Mgbe ịsachasịrị ma kpọnwụọ ụkwụ gị, oge erugo maka ịkpụ ntu. Cheta na ọ ka mma ịghara inye ha ụdị okirikiri n'ihi na ha nwere ike banye n'anụ ahụ, mana ị ga -enwe ike ịbelata nke ọma, nke na mgbe emechara agba ya, ọ ga -adị ka uwe. N'ezie, na mgbakwunye na ịkpụ n'onwe ya, ịkwesịrị itinye ha. Ebe ọ bụ na nzọụkwụ a dị mkpa iji nwee ike iwepu akụkụ ma ọ bụ akụkụ ndị siri ike na -apụtakarị.
Na -elekọta cuticles na ikiri ụkwụ
Cuticles bụ akụkụ ọzọ dị mkpa nke aka na ụkwụ abụọ.. Yabụ, ịkwesịrị ilekọta ha ma ọ bụrụ na ịchọghị iwepụ ha. Ihe ị ga -eme bụ itinye mmanụ ole na ole n'ime nke ọ bụla. Ka anyị mee ka ha dị nro. Nweta uru na ịhịa aka n'ụkwụ niile, na -emesi akụkụ ikiri ụkwụ ike. N'ihi na ọ bụ nke ọzọ nwere ike inye anyị nsogbu ma yie ụfọdụ mgbape. Yabụ, ịkwesịrị itinye mmiri mmiri wee gaa maka okwute ka ị sị nabata akpụkpọ ahụ nwụrụ anwụ. Mgbe ịmechara, tinye moisturizer.
Nhọrọ nke enamel
Mgbe ụfọdụ anyị nwere ike tinye ntu na ntu mgbe ha enweghị mmecha oge niile. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ugbu a ịkụ nzọ ụkwụ ikpeazụ, nke bụ itinye ụcha. Agbanyeghị obere oge gara aga, ị ga -etinyerịrị nchekwa na -akpọnwụ. Ọ ga -abụ oge ịhọrọ agba nke enamel. Ị nwere ike ịme ihe eji achọ mma ma ọ bụ nye ya mmetụ echiche wee gaa maka imepụta ihe, dịka ọmụmaatụ, na ntu mkpịsị ụkwụ ukwu. Ihe ọ bụla masịrị gị, tee ha ka ha kpọnwụọ kpamkpam. Ozugbo akpọnwụchara, ịkwesịrị itinye mkpuchi na -enwu iji mee ka nsonaazụ ya bụrụ ọmarịcha wee dịtere aka.
Ozugbo anyị tinyere enamel ahụ, ọ bụ eziokwu na anyị ga -ahapụrịrị ka ọ kpoo nke ọma. Mana enwere otu nzọụkwụ ikpeazụ nke anyị ka ga -eme, ya bụ, ọzọ anyị ga -achọ nzọ na oyi akwa nke ihe na -enye ọ moistụuriụ n'ụkwụ niile. Ọ bụ eziokwu na ọ bụrịrị nzọụkwụ anyị mere mana ọ gaghị abụ nke ikpeazụ. Ka ịba mmiri dị mma ka ọ bụ oge ịkụ nzọ na ya. Ugbu a ị ga -enwe pedicure ọkachamara ka ị nwee ike itinye ya n'ọrụ oge ọ bụla na ebe ọ bụla ịchọrọ. O doro anya na ọ gaghị adị mgbagwoju anya dịka ọ gaara adị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Ọkachamara ọkachamara: Otu esi eme ya site na nkwụsị
Igodo iji belata nchekasị